Ndeipi kureba kwekusarudzika mwenje yandinoda yeTV yangu? - MediaLight Bias Chiedza
Mhoroi apo! Kunyangwe iwe ukawana MediaLight kana LX1 bias mwenje, iwe ungangodaro unoshamisika kuti yakareba sei tambo iwe yaunofanirwa kuwana yako kuratidza.
Unogona kushandisa Calculator iyi! Iyo inoshanda kune ese ari maviri MediaLight uye LX1, uye zvinoenderana neyedu kurudziro yekuisa mwenje 2 inches kubva kumucheto pamativi ese.
Ndokumbira umirire kuti karukureta itakure
Kana iwe uri "pakati-hukuru," (kureva 3.11 metres), unogona kutenderera pasi mune akawanda mamiriro. (3.4 metres haisi pakati-hukuru).
Kazhinji kutaura, kweese .25 metres pamusoro peinotevera saizi yepashure, iwe ungade kuisa mwenje inenge imwe inch kubva kumucheto. Kurudziro yedu yakavakirwa pakuiswa 2 inches kubva kumucheto kwechiratidziro.
Iwe unozoona kuti inotevera chati inoratidza yechitatu sarudzo ye "maonesheni pane tafura." Kana iyo TV iri mberi kubva kumadziro (iti 3-6 inches), haufanire kuve nemwenje padhuze padhuze uye unogona kubva nepfupi mutsara.
Unogona kushandisa kurudziro iyi neMediaLight, asi isu hatikurudzire neLX1. Icho chikonzero ndechekuti Iyo MediaLight inosanganisira imwezve yekuwedzera Hardware, senge yakasanganisirwa tambo yekuwedzera iyo ingangodiwa kuisa nemazvo dimmer IR inogamuchira padhuze nemucheto wekuratidzira.
Kunyange zvakadaro hauna chokwadi chekuisa mwenje pamativi matatu kana mana?
Kazhinji kutaura, iwe unofanirwa kuisa mwenje kumativi matatu chete kana iwe uine chero cheanotevera:
Zvipingamupinyi - seTV iri pachigadziko kana pasina nzvimbo yekuti mwenje upfuure pazasi peTV. Mumwe muenzaniso ibha rezwi kana wepakati chiteshi mutauri wakananga pazasi peTV (zvinonanga zvinoreva kubata zvese nzira kusvika kune mashoma masendimita pazasi).
Zvinotsausa - kunge tambo yemawaya kana boka rezvinhu pasi peTV (set-top mabhokisi, vhasi, mifananidzo yakamisikidzwa, nezvimwewo). Kunze kwekuona, kunze kwepfungwa!
Reflections - Kana iyo terevhizheni iri petafura yegirazi kana pamusoro chaipo (mukati ma4-5 inches) girazi rinoonekera kana wepakati chiteshi mutauri, zvinogona kuzokonzeresa. Zvirinani kusiya magetsi.
Mativi mana akanakisa kana TV iri pamadziro, asi haugone kutadza nemativi matatu. Kana pasina chepamusoro chashanda, unogona kuisa magetsi kumativi mana. Mumamiriro akaipisisa, bvisa pasi.
Zvino, heino mamwe enitpicky ruzivo nezve nei tisingakurudzire iyo "kuratidza padanda" yekoramu kune vamwe vanhu:
Iyo yechitatu ikholamu mune sizing chati iri pamusoro inokonzeresa kumwe kuvhiringidzika, uye ini ndiri pafenzi nezvekurega iyo yechitatu ikholamu nekuda kwekureruka, kunyangwe zvichishandisika mumamiriro mazhinji apo TV kana monitori iri pachigadziko maringe nechidziro chegomo .
Imwe nzvimbo iyo iyo "inoratidzira pachigadziko" yekumisikidza inoshanda mushe iri pamakomputa madiki macomputer anosvika makumi matatu nemaviri ", kunyangwe ini ndashandisa 32 mita kuora pane 1" Sony Bravia uye ndakakwanisa kumisikidza mareferensi maringe nemwenje. grey madziro.
Nekudaro, iyo Mk2 Eclipse 1 mita inoramba iri kurudziro yekuratidzwa kwemakomputa kunyangwe isingawanzoreba kureba kutenderera mativi matatu kana yakaiswa kumucheto. Kana iwe uchinetseka kuti nei, inzwa wakasununguka kunditumira email. Kune boka rezvikonzero uye ivo vanogona kunge vari zvishoma zvakanyatsotsanangurwa pane ino posvo.
Nekudaro, sezvaungaona, iyo MediaLight Mk2 Eclipse kazhinji haina kureba zvakakwana kuti ingotenderedza mativi matatu uye inotaridzika kunge yakanaka, ine yakapfava uye yakatenderedza.
Mu "ratidziro pachigadziko" kumisikidzwa-U kumisikidzwa, tiri kuisa mwenje kumberi kubva kumucheto uye hatina urefu hwakareba kuti titenderedze mativi matatu echiratidziro dai taive pane akakurudzirwa masendimita matatu kuumba mupendero.
Semuenzaniso, pamwe isu tiri kuisa 2 metre strip pane 65 "kuratidza. Kuti titenderedze micheto, tinoda 2.8 metres. Saka, tinoenda sei kumativi matatu nemativi maviri chete metres? Isu tinoisa MediaLight zvakanyanya kubva pamucheto wekuratidzira.
Vamwe vanhu vanofarira izvi nekuti zvinounza halo yakasununguka uye inopararira, inoenderana zvakanyanya nezvaungave wakaona neyakare MediaLight Single Strip kumashure mukati mezuva (tambo imwe yakatwasuka kumberi kweTV), kana iyo yakwegura Yakanaka-Lume luminaires. Mumamiriro ezvinhu aya, mwenje iri kumberi kubva kumucheto, saka urikuimhanyisa padanho repamusoro kupenya kubhenekera kwekudonha kubva pakati peTV. Funga nezvekuti mwenje unoratidzika kudzikira sei kuwedzera kwaunowana kubva pakati pechiratidziro. Kana yakafa-pakati, pachave nekuwanda kwekudonha kusati kwasvika kumucheto.
Vamwe vanhu vakafarirawo nzira iyi nekuti inogona kudhura zvakanyanya. Zvino zvatave kupa yakaderera mutengo sarudzo, LX1, uye musiyano wemutengo pakati pe1m ne2m inongova $ 5 maringe ne $ 20, ndinonzwa kuti nzira iyi haina kubatsira.
Zvakare, iyo LX1 haisanganise .5m yekuwedzera tambo, saka pane mamwe mamiriro ezvinhu aungatadza kubatirira tambo ipfupi kune yeTV chiteshi che USB (tambo inogona kusasvika kumucheto kweTV uko kwakawanda, asi kwete zvese, vagadziri vanoisa iyo USB).
Kana iwe uri-pakati pehukuru unogona kukwanisa kushandisa tambo diki. 3.11 iri-pakati pe3 na4. 3.33 haisi. Paunenge usina chokwadi, tenderera nekuti iwe unogona kugara uchigura chero yakawandisa MediaLight kana LX1.
Kune * macomputer monitors kwete pamadziro egomo *, unogona kushandisa 1 mita tambo. Iyo chati inokuratidza izvo zvaizotaridzika.
** Dzimwe nguva maTV ane chirevo "hump" pazasi. Izvi zvakajairika nezvakawanda zve Ultra-yakatetepa OLED kuratidza kuti ugadzire zvemagetsi nematauri. Iwe unogona achiri kumhanya mwenje pazasi kutoti iwo marambi angave ari kubata madziro. Sezvineiwo, iwe unoda nezve 1-2 "kure nemadziro. Iyo yakadzika pazasi yaisazotaridza kupenya uye iyo" halo "yaizove yakatetepa pazasi, asi haina kutaridzika yakaipa.
Tine rumwe ruzivo nezve kuisa mwenje pamusoro peaya humps pane edu kugadzwa peji.
Previous nyaya Kutaura nezve kubatira mwenje pane iyo Murideo chiteshi
inotevera Pendi yezvidhinha kana yevaravara "haiparadzi" mwenje wakaringana?